Waa maxay sababta loo doorto HRF - Wuxi Hai Roll Fone Science&Technology Co., Ltd.
MAXAA LOO DOORANAYAA HRF
Kooxdayada Xakamaynta Tayada waxay hubisaa in aan waxba lagu kaydin taas oo aan ahayn heerarka tayada ugu sarreeya.
Waxaan kormeernaa dhammaan alaabta soo socota ka hor inta aan la saarin bakhaarka.
Adeegga iibka ka dib ee xirfad leh
1. Dhammaan alaabtayadu waxay leeyihiin dammaanad 12 bilood ah.
2. Raac amarka ilaa aad ka hesho alaabta.
3. Dhammaan alaabtayada waxaa si adag u kormeera waaxdayada QC ka hor inta aan la keenin
4. Tusaalaha dalbashada 1-3 maalmood oo shaqo gudahood
Haddii ay jirto wax su'aal ah oo ku saabsan alaabtayada, rarida, xirmada, iwm. Pls, ha ka waaban inaad nala soo xiriirto.Waxaan isku dayi doonaa inta karaankeena ah si aan u xalinno dhibaatooyinka.
Waxaan ku siin karnaa adeegga ugu fiican ee iibka ka dib iyo taageerada farsamada.Haddii aad wax su'aalo ah ka qabto dhibaatooyinka hawlgalka ama farsamada, waxaanu kuugu jawaabi doonaa 24 saacadood gudahood.
Gaadiid ku habboon
Warshadayadu waxay ku taal magaalada Wuxi, oo u xidhan magaalada Shanghai (laba saacadood ayaa u jirta), taas oo ku siinaysa wakhti gaaban iyo kharashyo gaadiid oo jaban.
Horumarin iyo wax ku ool ah
Tusaale ahaan, qalabka samaynta duubabka gidaarka/saqafka ayaa xalliya dhibaatada daadinta saqafka ee mashiinka caadiga ahi aanu awoodin inuu wax ka qabto.
Iyo sidoo kale, mashiinada samaynta waa alaabooyinka kormeerka-qaran ka dib kormeerka dibadda iyo kormeerka muunada.
Badeecooyin kala duwan oo buuxa
Waxaan ku siin karnaa dhammaan noocyada qalabka samaynta duub kuwaas oo loo isticmaali karo samaynta nooc kasta oo qaab sida aad u baahan tahay.Shirkaddu waxay samayn kartaa badeecooyin aan caadi ahayn oo loo baahan yahay macmiilka.
Xirfadlaha iyo adeegga waqtiga
Sida adeegga iibka ka hor, shirkaddu waxay ku bixisaa nooca muunadda bilaashka ah.Hagaag, cidda ay khusayso kharashka xamuulka waa wada tashi.
Sida adeegga iibka, shirkadeena waxay siisaa qiimo dhimis iibka iyo gunnooyinka macaamiisha qaybaha nugul.Waxaa jira qiyaastii 3-bilood wareeg ah oo wareejin ah laga bilaabo bilowga dalabaadka.Wareegga bixinta ajnabigu wuxuu la mid yahay midka gudaha.
Marka laga hadlayo iibka ka dib, waxa jira dammaanad hal sano ah.Inta lagu jiro muddada dammaanadda, dayactirka mashiinka iyo dayactirka ayaa lagu bixin doonaa bilaash.
Waxaa jira shaqaale farsamo oo gaar ah iyo liis koox khibrad leh oo mas'uul ka ah hubinta tayada.Halkan waxaa ah khabiiro farsamo iyo xirfad leh, shaqaale sare oo ka tirsan ganacsiga shisheeye iyo injineero.
Waxa intaa dheer, shirkadeena waxay ku siin kartaa ganacsiga OEM waxayna si bilaash ah u siin kartaa macaamiisha iyada oo la adeegsanayo qalabaynta duubista iyo xariiqda jarista, jarjar dhererka.